Hal sano kadib xaalada Wariye Cabdixakiin Cumar Jimcaale oo liidato iyo Asago wariyuhu kacabanaayo lacag ay Dowladu Usaxiixday oo unan wali helin.
Wariye cabdi xakiin cumar jimcaale oo katirsanaa wariyayaasha Idaacada Dowlada FKG ayaa waxa ay kooxo hubeysan ku dhaawaceen 11 August sanadii tagtay ee 2007 Gurigisa oo ku yaalo magaalada Muqdhisho.
Wariyaha oo ay xaaladiisa caafimaad aynan wanaagsaneyn ayaa hada waxa uu ku sugan yahay Magaalada Nayrobi halkaas oo uu saaka ku qabtay shir jaraa’id oo Wariyuhu uu oga war bixinayay Hal sano kadib si ay tahay xaaladiisa. Wax uuna sheegay Wariye Cabdi xakiin in ay hada xaaladiisu tahay mid adag asagoona kasheegeeyay sida ay wax ugu dhaceen waxa uuna ku bilaaway. “waxey aheyd xili habeen ah markii ay Sideed nin oo ku hubeysan Qoryaha Fudud gaar ahaan kuwa loo yaqaano Kalaash Koofka ay igu soo galeen Gurigeyga ayagoona indha iga qabtay Toosh markaas kadib ayey igu dhufteen shan xabadood.
Gacanta Bidixda oo ah tan hada uu lajiifo dhaawaceeda ayaa waxa uu sheegay in wariyuhu xili uu tilmamaayay sida ay xabaduhu ukala haleeleen in ay kaga dhaceen ilaa sadex kamid ah xabadiihii lagu dhawacay, halka mid kalana ay oga dhacday Xabadka dhinaca Midig ee Naaska xigta ayadona sii jeexday maqaarka iyo hilibka inkasto aynan jabinin lafta, Sidoo kale Xabada Shanaad ayaa iyana ka haleeshay Gacanta Midig ayadoo hilibka un dhex martay laakin anan wax jab ah ugeysanin Gacanta midig.
Inkastoo uu kabadqabo jirkiisa inta kale hadana waxa uu ladhibtoon yahay wariye Cabdi hakiin Cumar Jimcaale Gacanta Bidix oo ay kaga dhacday ilaa Sadex Habadood waxaana horay loogu sameyay wariyaha ilaa Afar qaliin kuwaaso sadex kamid ah loogu sameyay intii uu jogamay wadanka Soomaaliya halka kan afaraadna uu ku galay Isbitaalka Kijaabi oo 70 KM ujiro magaalada caasimada ah ee Nayrobi hadana waxa uu wariye Cabdi xakiin uu shegay in ladhowraayo qalinkii shanaad maadaa Gacanta Birtii lagu kabay ay jabtay dhanka hoose ubadatay ayna muuqato sida aad araktiinba qalooc Gacantisa.
Maanta oo ah Sanadguuradii koowaad ee kasoo waregatay markii ladhaacaway wariye Cabdi xakiin ayaa waxa uu baritaan caafimaad u aadayaa Isbitaalka Kijaabi halkaas oo uu ku galay qalinki ugu danbeyay asagoona umahad celiyay wariye Maxamed Cadoow oo ka taageeray dhinaca qalinkii lagu sameyay.
Si kastaba ha ahaatee waxa uu kusoo ban dhigay Shirkiisi jaraa’id ee uu manta ku qabtay Hotelka Barakaad waraaqad Dhukuminti ah oo cadeyneyso in Dowladu ay sisay wariyaha lacag gaareyso 10 $ kadib markii uu dhawacmay asagoona sharaxaad kabixiyay qaabka loo siyay lacagtaas ayuu ku bilaabay. “markii an dhawacmay kadib ayaa Aniga oo ku jiro Isbitalka Keydsaneyn ee ku yaalo duledka Bari ee Magaalada Muqdhisho ayaa waxa ay usheegeen Dhaqaatirtii idaaweyneysay oo kasocotay Wadanka Qadar kana tirsanaa Hayada Bisha cas.
Gudi ay Wasaarada Warfaafinta isoo dirtay oo ka koobnaa ilaa Sadex xubnood oo kala ahaa Agaasime Bahalaawi, Yuusuf farey iyo rag kale, waxeyna ku wargaliyeen Dhaqaatirtii Wafdigaas in Wariyaha aanan waxba looga qaban Karin Wadanka Soomaaliya maadaama aynan ayagu haynin Qalabkii lagu kabi lahaa Gacantisa ayna tahay in lo qaado wadamo kabaxsan Soomaaliya.
Balse waxa uu shegay Cabdi xakiin in warbaxintii ay ugudbiyeen wafdigii loo soo diray Madoobe Nuunow oo xiligaas ahaa Wasiirkii warfaafinta kadib markii uu arkayna uu asna usii gudbiyay Raysal wasaarihii xiligaas Pro. Cali Maxamed Geedi, Asagona tilmayay in Pro. Geedi uu saxiixay in Wariye Cabdi xakiin cumar jimcaale ay Dowladu Siiso lacag gaareyso Toban kun oo Dollar loona diro Wadanka Kenya si loogu soo daaweyo Asagoona Maanta soo bandhigay Koobigii cadeynta ahaa ee dukumantigii uu usaxixay Raysal wasaarihii hore, waxa uuna intaas ku daray in xitaa Wasiirkii Maaliyada ee xiligaas Xasan Maxamed Nuur (Shaati gaduud) uu asana Saxiixay kadib markii uu usoo gudbiyay Reysal wasaare Geedi.
Inkastoo ay Sharci aheyd in warqadu ay kusoo noqoto Xafiiska Agaasinka Qeybta Maamulka Lacagta ayaa waxa uu sheegay in wali ay ku maqan tahay oo aanan la ogeyn waxa ay uxayiran tahay. Asagoona qiray wariyuhu in ay in ay uxayiran tahay lacagtaas Axmed Yaaqshiid oo ah Agaasimaha Wasaarada Maaliyadda ee Dowlada Soomaaliya waxa uuna sheegay wariyuhu in uu qeyb ka leeyahay dhibka soo gaaro gacantiisa hadii ay sidaas ka sidarto asagona shegay in Dowladu aynan uwayay Muwaadinkeeda lacag intaas dhan.
Dhanka kale waxa asna uu sheegay in uu xubin katirsan Isbaheysiga Dib uxoreynta Somaaliya oo ah Pro. Cabdi rahmaan Ibi uu ubalan qaaday 27\_03\_ 2008 xili uu ka qeyb galayay dood ka dhaceysay Hotelka lagu magacaabo Jester House ee ku yaalo Town magaaladaan Nayrobi in uu isbaheysigu bixin doono lacagta lagu daaweynaayo Cabdi xakiin hadii uu bixin waayana uu asagu bixin doona laakin waxa uu sheegay in uunan xitaa xiriir ka helin lacag iska daayee.
Ugu danbeyntii xaalada wariye Cabdi xakiin cumar jimcale ayaa ah mid liidato asagoona garab gal ooga baahan dadka soomaaliyeed ee walaala ah.